एसईईको नतिजा सार्वजनिक (नतिजा कसरी हेर्ने ?) -
१ भाद्र २०७७, सोमबार १९:३४
खवरबाटिका १ भाद्र २०७७, सोमबार १९:३४ 1 min read
काठमाडौं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित भएको हो । नतिजा टेलिफोन, एसएमएस र बेभसाइटमा हेर्न सकिन बोर्डले जनाएको छ ।
नतिजा कसरी हेर्ने
एनटिसी , नमस्ते र एनसेल प्रयोगकर्ताले
SEE Symbol_Number टाइप गरी 1600 मा SMS गर्ने ।
एनटिसी , नमस्ते प्रयोगकर्ताले IVR सेवा अन्तर्गत
१६०० डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार
http://see.ntc.net.np, neb.gov.np, see.gov.np, see.ncell.axiata.com, see.edusanjal.com, result.ekantipur.com